ထိပ်တန်း 10 ရုရှားကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ထိပ်တန်း 10 ရုရှားကာစီနိုဆိုဒ်များ
(784 ပျမ်းမျှအားမဲ: 4.00 )5ထဲက
Loading ... လောင်းကစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ slot ကစက်တွေနဲ့လောင်းကစားအိမ်၏လျှင်မြန်စွာတိုးပွားလာ၏ 21st ရာစုအစဦးကတည်းကရုရှားအစိုးရအဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးမူဝါဒကပြဿနာများ၏တဦးတည်းသို့လှည့်ထားသည်။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအားလုံးအငယ်လူဦးရေအဘို့စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်ရသောဒေသခံအာဏာပိုင်များ, အဘို့ကြီးစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ရတဲ့သောတိုင်းပြည်, ကိုကျော်ဖြန့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။
RussiaCurrently ၏အလံ, ရုရှားအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းအများအပြားဒေသဆိုင်ရာဘာသာရပ်နယ်ပယ်များတွင်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ် - 2009 အတွက် - ကရုရှားရဲ့တင်းကြပ် Anti-လောင်းကစားဝိုင်းမူဝါဒ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နိုင်ငံ၏ပိုင်နက်၏ကျန်တရားမဝင်အဖြစ်ကိုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်အတွက်အာဏာပိုင်များအမှန်တကယ်ဖဲချပ်ဝေ-related က်ဘ်ဆိုက်များမှကစားသမားများ '' access ကိုတစ်ခုသိသာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစာသားပိတ်ဆို့ထားပြီးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထားတဲ့ web-based လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများ, ထောက်ခံဖူးဘူး။
ထိပ်တန်း 10 နယူးရုရှအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
လောင်းကစားဝိုင်းအားလုံးသည်ပုံစံများကိုတရားဝင် 1928 အတွက်နှင့်ရုရှားဆိုဗီယက်စည်းမျဉ်းအောက်၌ဖုံးထားခဲ့ပါတယ်အခါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတားမြစ်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာအချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှတဆင့်ခံယူအခါ 1980s နီးပါးအဆုံးအထိကြာခဲ့သည်။ 1988 ခုနှစ်, တိုင်းပြည်သာအချို့သောဒေသများရှိဥပဒေရေးရာ slot ကစက်တွေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုအပြည့်အဝ 1989 အတွက်ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးတည်းမော်စကိုကို run ခံရ 1989 လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များကျော်နှင့်အတူ 2002 နှင့် 50 အကြားကာလ၌, ရုရှား၏ပိုင်နက်အပေါ် operating လောင်းကစားရုံ၏နံပါတ်တစ်ချွန်ထက်တိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အစိုးရလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အရေးတကြီးဆောင်ရွက်မှုများယူဖန်ဆင်းသော, ဖျော်ဖြေရေး၏ဤအမျိုးအစားသည်ဒေသခံနိုင်ငံသားများအကြား ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့စည်းမျဉ်းအတော်လေးဆင်းရဲသားကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားကြောင်းဥပဒေရုရှားအစိုးရအားဖြင့်လွန်သောအခါ 2006, သည်အထိကြာရှည်ခံသည်။ ထို့နောက်သည်အထိဒေသခံဖောက်သည်အများဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
Kaliningrad Oblas, Altai အဘိဓါန် Krai, Primorsky Krai နှင့် Krasnador Krai: 2009 ခုနှစ်, လောင်းကစားဝိုင်းတိုင်းပြည်လေးဇုန်တစ်ဦးစုစုပေါင်းတရားဝင်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုသုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်သည်အထိကြာခဲ့သည်။ 2012 မှာတော့တိုင်းပြည်အတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားပိတ်ပင်မှုအွန်လိုင်းလောင်းကစားပံ့ပိုးပေး '' ဝက်ဘ်ဆိုက်များနိုင်ငံတွင်း၌ပိတ်ဆို့ထားရပါမည်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ရုရှားတရားရုံးချုပ်တစ်အာဏာရမှတဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်စကားယူဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Roskomnadzor - ရုရှားအစိုးရအားဖြင့်တရားမဝင်အဖြစ်ကိုကြွေးကြော်အားလုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာဒီလိုဖော်ပြထားကြောင်းစာရင်း - 2012 အတွက်အများပြည်သူနောက်ပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာရင်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလောင်းကစားအော်ပရေတာများကကျင်းပသည့်ဒိုမိန်းများ၏အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဒါဟာရုရှားဖောက်သည်များအတွက်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖို့ access ကိုပိတျထားဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးဆုံးအမည်များကိုအချို့မှဦးဆောင်, ဒါပေမဲ့တခြားအော်ပရေတာဆဲနိုင်ငံအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး။
ပြန်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းကျော်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပိတ်ပင်မှုလောင်းကစားဝိုင်းကန့်သတ်အထူးသဖြင့်မကြာခဏခရီးသွားဧည့်သဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသောဒေသများရှိတစ်နည်းနည်းဖြေလျော့ခဲ့ကြရသောပြီးနောက်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းပိတ်ပင်မှုသြဂုတ်လ 1989 အတွက်အစိုးရကရုတ်သိမ်းခဲ့မော်စကိုအတွက်ပထမဦးဆုံးဂိမ်းကစားတည်နေရာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်သည်အထိလောင်းကစားရုံများနှင့်အလောင်းအစားအိမ်များတစ်ခုတိုးပွားလာရရှိနိုင်ကြ၏။
သို့သော်နိုင်ငံ၏ပိုင်နက်အပေါ်လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကျော်ဆင်းရဲသားကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, စောင့်ကြည့်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုလောင်းကစားဝိုင်းအစိုးရများအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေစတင်ခဲ့သည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤသည် 2009 အတွက်ရုရှားလောင်းကစားဥပဒေအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှုများကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းရုရှား၌လောင်းကစားဝိုင်းတရားဝင်တိုင်းပြည်ဝေးလံသောအစိတ်အပိုင်းများမှာတည်ရှိပါတယ်အများအပြားဒေသများအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေသများနေသောခေါင်းစဉ်: Kaliningrad Oblast, Azov-စီးတီး (Rostov Oblast ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစာရင်းထဲကဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည်) Altai အဘိဓါန် Krai နှင့် Primorsky Krai ။
အဆိုပါ Primorsky Krai ဿုံဟာရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအာရှစျေးကွက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ရန်အတွက်ရှေးခယျြသောစဉ်းစားသည်။ အဆိုပါဒေသသည်ဒေသတွင်းမှအာရှအဆင့်မြင့် roller ဆွဲဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဒေသခံစက်မှုလုပ်ငန်းပေးဖြစ်သည့်တရုတ်နယ်စပ်နီးစပ်တည်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ဧရိယာပိုမိုကစားသမားကိုဆွဲဆောင်မှာရည်မှန်းကြောင်း Vladivostok အနီးအနားမှာတည်ရှိပြီးတစ်စူပါလောင်းကစားရုံဘို့စီစဉ်ထားလည်းရှိပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ 2014 အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်စာရင်းထဲမှာမှရိုင်းနဲ့ဆိုချီအပါအဝင်သို့ရလဒ်ဖြစ်သောဒေသဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဒေသများ၏အရေအတွက်တိုးပွားလာဖို့အစိမ်းရောင်အလင်းပေးသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
အွန်လိုင်းလောင်းကစား, အခြားတစ်ဖက်တွင်, အပြည့်အဝနိုင်ငံအတွင်းပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ အလားတူရုရှားရဲ့ပိုင်နက်၏ကျန်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများအသက်ရှင်ရန်သက်ဆိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည်၏မူဝါဒမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာမကြာမီမည်သည့်အချိန်ကဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါမဆိုလမ်းထဲမှာမပြထားဘူး။
ယင်း၏, အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါထိန်းအကွပ်မဲ့များနှင့်ညံ့ဖျင်း monitor မြင့်တက်ဒေသခံလူဦးရေအကြားအကြီးအလောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုမှုနှင့်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောလူတို့တွင်အဖြစ်လောလောဆယ်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ဦးမတည်ငြိမ်သောဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်အတွက်, သို့သော်, ဥပဒေရေးရာဖြစ်သောဖက်ဒရယ်ထီရှိ၏။ Gosloto နှင့် Sportloto - အဆိုပါထီကစားသမားနှစ်ဦးကိုနိုင်ငံပိုင် run ထီကနေတဆင့်အာမခံဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ တချို့ကအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအော်ပရေတာများ၏လိုအပ်ခဲ့အထူးလိုင်စင်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူစျေးကွက်အလောင်းအစားအားကစားအတွက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
RussiaCurrently အတွက်ဥပဒေပြုရေးလောင်းကစားရုရှားအစိုးရလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးန်ဆောင်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အဓိကပြည်နယ်စည်းမျဉ်းကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ ကလောင်းကစားဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းကမှကြွလာသောအခါစံများနှင့်ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းစောင့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်သောဖက်ဒရယ်အလုပ်အမှုဆောင်အေဂျင်စီရှိပါသည်။
ရုရှားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအဆိုအရ, လောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှစာပေးစာယူမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများကစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည်ကိုယ်နှိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့အဘယ်သူမျှမဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ, တိုင်းပြည်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များလောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးစီစဉ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေးအပ်ကြသည်။
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေများနှင့်အတူစာပေးစာယူဖွဲ့စည်းလေးယောက်ဂိမ်းဇုန်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတပူတင်အထူးဂိမ်းဇုန်၏နံပါတ်တိုးမြှင့်အပေါ်သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သော Altai, Kaliningrad နှင့် Primorie အတွင်း, အပြင်အဖြစ်နိုဒါကိုဒေသနှင့် Rostov ဒေသအကြားရှိနယ်စပ်အပေါ်ကို set up ခံရဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
အစိုးရတစ်ဂိမ်းဇုန်ဖန်တီးဖျက်သိမ်းပြီးအခွင့်အာဏာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်မဲဆန္ဒနယ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အစိုးရကောင်များနှင့်သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်ရှိဇုန် '' အမည်များ, border နှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ setting ကြော်ငြာအတည်ပြု။
တိုင်းပြည်များ၏ဖက်ဒရယ်အခွန်ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း Bookmakers အော်ပရေတာ, စုစုပေါင်းနှင့်အလောင်းအစားအချက်များမှတ်ပုံတင်ရန်အချို့သောတာဝန်များကိုပေးထားသည်။ ဒါဟာအစလောင်းကစားကိရိယာများ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေစစ်ဆေးနေမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်အဆုံးစွန်ရဲ့ယေဘုယျအရည်အချင်းကိုအတွက်ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှကြွလာသောအခါအခြို့သောတိကျသောတာဝန်များကိုလည်းအချို့သောအာဏာပိုင်များထံပေးအပ်ထားတယ်။
ရုရှား၌လောင်းကစားဝိုင်းများ၏အခြေခံအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်နှင့်တိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအဘို့စည်းမျဉ်းဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါအဓိကဥပဒေပြုလုပ်ရပ်ဒီဇင်ဘာလ 29th, 2006 အမှတ် 244-FZ ၏ဖက်ဒရယ်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, လောင်းကစားဥပဒေအထူးသဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်လောင်းကစားဝိုင်းဇုန်အတွက်တိကျသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်အမျိုးအစားများ မှလွဲ. တရားမဝင်လောင်းကစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုတောင်းဆိုထားသည်။
ပိုကောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လောင်းကစားဥပဒေအကောင်အထည်ဖော်လိုအပ်ချက်များနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှရှင်းလင်းချက်ပေးအများအပြားလက်အောက်ခံဥပဒေပြုပြဋ္ဌာန်းလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ထီစည်းမျဉ်းနှင့်ဆက်စပ်သောသောဥပဒေပြဌာန်းသီးခြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Lottries 11 မျှ, နိုဝင်ဘာလ 2003th ၏ "ထီတွင်" ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ 138-FZ ။
ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများခြုံငုံပြည်နယ် RussiaConsidering တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား, အွန်လိုင်းလောင်းကစားလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတိုးပွားလာစေရန်ဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ရုရှားမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားနည်းတူအကြီးအကျယ်မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ကုသကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ web-based လောင်းကစားဝိုင်းန်ဆောင်မှုလက်ရှိတက်ကြွစွာပိတ်ပင်ထားနေကြသည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာထက်ပို - 2006 အတွက် - အခွင့်အလမ်းများစွာကစားဂိမ်းများကိုတရားဝင်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများကတားမြစ်ထားပါသည်ခဲ့သည်။ Poker, သို့သော်, ဆဲသောကြောင့်, ကကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေမဆွေးနွေးတဲ့မီးခိုးရောင်ဧရိယာ၌ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ဒေသအလိုက်-based ကစားသမား, ISP များအားလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များပိတ်ဆို့ဖို့တောင်းပြီဆိုတဲ့အချက်ကို၏နေပါစေပင်လယ်ရပ်ခြားပေးသူ '' က်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ပါပြီ။
0.1 ထိပ်တန်း 10 နယူးရုရှအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း